ခဲသွင်းခြင်း၏စူပါပါဝါ Martech Zone
ငါတို့ကဒီအချက်အလက်တွေကိုအလုပ်တွေမှာခဏခဏတွေ့ခဲ့ရတယ်၊ ပြီးတော့ဒီပုံနဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တကယ်စိတ်လှုပ်ရှားမိတယ်။ မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့နှင့်အတူပူးပေါင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် Highbridgeကျွန်တော်တို့ရဲ့ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက် software ကို Right On Interactive (ROI) မှစပွန်ဆာများနှင့် Ryan Howe မှအံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့်စွမ်းရည်ကိုရရှိသည် Henchmen ရုပ်ပြကျနော်တို့ထုတ်ဖော်ရန်ပျော်ရွှင်ကြသည် ခဲသွင်းခြင်း၏စူပါအင်အားကြီး.
ခဲအမှတ်ပေးမှုသည်အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါ။ သို့သော်အမှတ်ပေးစနစ်ကို ဦး ဆောင်ရန် ROI တွင်ကွဲပြားသောအမြင်ရှိသည်။ သူတို့၏အမြင်တွင် 3D ဂိုးသွင်းခြင်းသည်နောက်ကြီးမားသောအရာဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်ခဲသွင်းခြင်းနှင့်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းသည်ယခုအဘယ်အရာကိုတိုးချဲ့သနည်း။ ဤသည်ကား:
ပရိုဖိုင်အမှတ်ပေးခြင်း + စေ့စပ်ပွဲအမှတ်ပေးခြင်း + ဘဝစက်ဝန်းအဆင့် = 3D အမှတ်ပေးခြင်း
ဒီအချက်အလက်တွေဟာ 3D ဂိုးသွင်းအဆင့်တိုင်းကို ၀ င်ရောက်ပြီး 3D သွင်းယူခြင်းဟာဘာလဲဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့နိုင်စေမှာပါ။ သင်သည်သင်၏ဖောက်သည်များနှင့်အလားအလာများကိုမည်သို့ယခုသွင်းယူနေသနည်း။ ဒီပုံစံကဘယ်လိုကွာခြားသလဲ။
သင်ပိုမိုသောအချက်အလက်များရှာဖွေနေသည်ဆိုပါကသူတို့၏နောက်ဆုံးဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုပါ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်နှင့်ခဲပျိုးထောင်။ နှင့်ခဲအမှတ်ပေး၏စူပါအင်အားကြီးပျော်မွေ့!
Tags: ဖောက်သည်ဘဝသံသရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးခဲသွင်းခြင်းLifecycle စျေးကွက်ဘဝသံသရာအဆင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်ပရိုဖိုင်းအမှတ်ပေးအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ်
3:2013 pm တွင်စက်တင်ဘာ 5, 21 မှာ
ဟေး! ဤ infographic ကိုနှစ်သက်သည်။ တော်တယ်။